Low-cost operators to boost domestic, regional tourism, say industry officials - NewZimbabwe.com Low-cost operators to boost domestic, regional tourism, say industry officials - NewZimbabwe.com
Low-cost operators to boost domestic, regional tourism, say industry officials
15th June 2016 Business
THE growth of low-fare airlines in the country is expected to help grow the tourism sector as travel becomes cheaper and connectivity improves, industry experts have said.
Low cost operator, Fly Africa, which was licenced by the Civil Aviation Authority of Zimbabwe (CAAZ) in August last year, started flying in November from Harare to Johannesburg and Victoria Falls to Johannesburg.
It has since expanded its wings to include the Harare to Johannesburg and Bulawayo to Johannesburg routes.
“The one challenge we have in Zimbabwe is accessibility to tourism destinations.
“The coming in of new players to service domestic destinations is a positive development which will boost confidence of travellers and marketers,” Zimbabwe Tourism Authority head of corporate affairs Sugar Chagonda told The Source.
Fastjet said it has identified many potential routes within and from Zimbabwe where it believes that the low cost model will stimulate the market and tap into the huge market of passengers currently travelling by bus.Advertisement